မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...
ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...
စိတ်သိပ်ရှုပ်နေလို့ ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...ရေးချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်ပေးချင်တာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်ဒါပေသိ ခဏလောက်တော့ ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ ပေးဖတ်ချင်တဲ့သူတွေလောက်ပဲ invite လုပ်ရင်ရော အဆင်ပြေပါ့မလား... အဖြစ်အပျက်တွေက ခဏခဏမလို့ နားတောင်မလည်တော့သူတွေကိုလဲ အားနာပါ၏သူများတွေ ဘလော့ဂ်မရေးပဲနားတုန်းက အားပေးနေခဲ့ပေမဲ့လဲ...ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ... ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ...တခဏလား...တစ်ဘဝလား...ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ... Gepostet von
don't !! don't let them win !! OK ?
ဟမ် .. ဘာဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲ။ မနေ့ကထဲက နားမလည်တာနော်။ သေချာတော့ သိဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပျက်နဲ့။
ဘာဖြစ်မှန်းတော့ မသိပေမဲ့ ဘလော့တော့ မပိတ်ပါနဲ့ဗျာ ...:)
ပိတ်စရာလား၊ပိတ်ရမှာက C Box
ဘလော့လား မပိတ်ပါနဲ့။ စိတ်ရှုပ်ရင် မရေးနဲ့ ခဏပစ်ထားလိုက်။ဘလော့ကတော့ ဒီအတိုင်းထားးသတိရလို့ လာနှူတ်ဆက်လည်း နားထောင်လိုက်Compulsory စာပြန်ရမယ်လို့ မဟောထားဘူးစာပြန်ရင်တော့လည်း ဝမ်းသာတာပေါ့။မပြန်တော့လဲ ကိတ်စ မရှိပါဘူး။ ခင်တာက ခင်တာဘဲ။ စာပြန်တာ မပြန်တာနဲ့ မဆိုင်ပြောချင်ရာပြောမောရင်ရပ်သွားလိမ့်မယ်ချိးမွမ်း ခုနစ်ရက် ကဲ့ရဲ့ခုနစ်ရက်အချိန်တန် နပိန်ကန်လိုက်မယ။်ရေးချင်ရင်ရေး မရေးချင်ရင်နေစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ဘဲထားပါInvite လုပ်တဲ့သူကို ဘဲပေးဖတ်တာ သဘောမကျဘူး ကြီးကျယ်တယ်လို့မြင်တယ။် ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့ နေတတ်သလိုဘဲနေ.။စိဘောက် လည်း ပိတ်စရာမလို. ပြောချင်ရာပြောသစ်ပင်မြင့်လို့ လေတိုက်တယ်လို့မှတ်ပါ။ ပြန်တော့ စကားမများစေလိုဘူး။ ပြန်ပြောဖြေရှင်းလို့ကတော့ပြီးမယ်မထင်ဘူး.ထင်တာပြောတာပါ။အပြင်မှ မဆုံ့ဘူးပါဘူး။ ဆုံရင်လို့ကတော့ခေါ်မှာပါ။ မှတ်မိပါတယ။် မင်းသမီးကလေးကို.။
hay, you shouldn't do keep going until you reach your BIG DESTINY (to get relation)
ဝ နားမီလည်တော့ဘူး။အမဂျီးနော်။ ဆိတ်ညစ်တယ်နော်။ နွားပြောင်းမွေးပါ။ဘီလော့ခ် ပိတ်တာ မကောင်းဘူးနော်။ဘီလော့ခ်ရွာက မျောက်ရွာလို မဟုတ်ဘူးနော်။ ပျော်စရာကောင်းတယ်။မမိ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ဆက်ရေးပါ။ အတိုက်အခိုက် ဆိုတာ ရှိတတ်တာပါပဲ။ ခွေးဟောင်လို့ တောင်မရွေ့ ပါဘူး။ အပင်မြင့်လို့ လေတိုက်ခံရတယ်ပဲ သဘောထားပါ။ private လည်း မလုပ်ပါနဲ့။ စာဖတ်သူ အသစ်တွေနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။(MMITP မှ မိတ်ဆွေဟောင်း တစ်ဦး)
You look so tired. Takeabreak. Go holiday. If you want to visit England, I will sendasponsor for your convenience.
စတီ အမြဲစိမ်းရဲ့ sponsor ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ နေရေးထိုင်ရေးကောဗျ ဟ ဟ ဟ...
Well, I am not in London. but my sister lives alone in my London place. So she can stay there.
ဟရေ အာမကြီးနော် ပိတ်တာကောင်းဖူးနော်။
ဟုတ်ပါပြီ စတီ အမြဲစိမ်းရယ် ခင်လို့နောက်တာပါ
you see how much you over act(pe` mya nay dar)"Ko..ပိတ်ချင်လဲ ပိတ်ပေါ့ဗျ.. ဘာလို့ အသံပေးနေတာလဲ .. အိုဗာတင်းတွေ"
Min ye` Maung
Min Thu Han
you မပဲ?If so, you are being exported to India hee hee. kidding
ဘလော့ဂ်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားပဲ စဉ်းစားနေတာ......
this is someone's present
ဥာဏ်မီသလောက်တွေးတောမိခြင်း upon Meaningful Wedding...
မေတ္တာ+သံယောဇဉ် = အချစ်...
Bloggers R Human 2!
စင်ကာပူက လတ်တလော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
လုပ်တိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါ vs လုပ်တိုင်းပဲလဲဖြစ်နေတဲ့အခ...